Pirezdaantii US Joo Baayidan Itoophiyaatti marii siyaasaa hunda galeessa akka gaggeeffamu gaafatan
11 months, 4 weeks ago 2090 Qoodi
Har'a Roobii Caamsaa 27,2021 ibsa Pirezdaantii Ameerikaa Joo Baayidan Waayt Haawus irraa baheen, tokkummaa Itoophiyaa eeguufi biyyatti gara tasgabbiitti deebisuuf marii siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e barbaachisaa ta'u jala sararaniiru.
Lola Naannoo Tigraayitti adeemaa jiru rakkoo namummaa geessise yaaddeessaa ta'u ibsuun, finxaaleeyyii Tigraay atattamaan dhukaasa dhaabuu qabu jedhaniiru.
Mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbileen araara biyyaaleessaafi waliigalteef dursa kennuun naannoo Tigraay qofa osoo hin taane wal dhibdeewwan bakkeewwan biyyatti garaa garaatti mul'achaa jiran dhaabuun gara marii fi waliigaltee biyyaaleessaa walootti galuun murteessaa ta'u cimsanii gorsaniiru, Pirezdaant Baayidan.
Naannoo Tigraayitti rakkoo lammiilee nagaarratti gahaa jiru yaaddeessaa ta'u kan ibsan Joo Baayidan, Itoophiyaatti balaa beela waggaa 40 asii mul'ate hin beekne itti dhufaa waan jiruuf humnoonni morkattoota hunda daandii nagaa akka hordofan, gargaarsi danqaa tokko malee kanneen miidhamaniif akka gahu mootummaan gaheesaa akka bahatu gaafataniiru.
Loltoonni Eertiraa fi humnoota Amaaraa naannoo Tigraay keessa atattamaan akka bahan gaafataniiru.
Ameerikaan Gamtaa Afrikaa fi Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (UN) waliin ta'uun rakkoo Itoophiyaatif furmaata falachuuf ejjennoo cimaa akka qabdu kan ibsan Baayidan, kanaafis Gaanfa Afrikaatti Ergamaa Addaa Ameerikaa Jeefri Filtmaan torban kana keessa gara Gaanfa Afrikaa akka dhufan eeraniiru.
Akkasumas Ameerikaan dhimma hidha Haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisee waliigaltee fedhii biyyoota hunda giddu galeessa godhateerra akka gahamu fedhii akka qabdu ibsaniiru.
Filtmaan guyyoota muraasa dura biyyoota naannichaa daawwatanii hoggantoota biyyoota kana waliin kan haasa'an ta'uus hoggantoota Itoophiyaa fi Eertiraarra deebii 'gaarii' hin arganne. Kana hordofees Ameerikaan anga'oota biyyoota lamaanirra qoqqobbii Viizaa fi diinagdee keesseetti.
Hidha Haaromsaa Ameerikaa Joo Baayidan Lola Tigraay